Ukusakazwa kwe-Ultrasonic kwe-Silica (SiO2) - Hielscher
I-Silica, eyaziwa nangokuthi i-SiO2, i-nano-silica noma i-micro-silica isetshenziswa kumuthi wokuxubha amazinyo, usimende, irabha yokwenziwa, i-polymer esebenza kahle kakhulu noma kwimikhiqizo yokudla njenge-thickener, adsorbent, anti-caking agent, noma isithwali samakha namakha. Ngezansi uzofunda kabanzi ngokusetshenziswa kwe-nanosilica ne-microsilica nokuthi imiphumela ye-sonomechanical ye-ultrasonics ingakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwenqubo nokusebenza kokugcina komkhiqizo ngokwenza ukumiswa okungcono kwe-silica noma ukuhlanganiswa kwe-silica nanoparticle.
Ukusabalalisa kweSilica / Ukumiswa kweSilica / iNano Silica (SiO2)
I-Silica itholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zama-hydrophilic kanye ne-hydrophobic amafomu futhi inosayizi wezinhlayiya omuhle kakhulu wama-micrometer ambalwa kuye kuma-nanometer athile. Imvamisa i-silica ayisakazeki kahle ngemuva kokumanzi. Kubuye kufake ama-microbubbles amaningi ekwakhiweni komkhiqizo. I-Ultrasonication inqubo ephumelelayo yokusabalalisa i-micro-silica ne-nano-silica futhi isuse igesi encibilikisiwe nama-bubble amancane kusuka ekwakhiweni.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Fumed Silica: I-Hielscher ultrasonic homogenizer UP400S ihlakazeka i-silica powder ngokushesha nangokuphumelelayo ibe yizinhlayiya ezi-single, mono-dispersse, nano-particles.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Fumed Silicia emanzini kusetshenziswa i-UP400S homogenizer ye-ultrasonic
Ekusebenziseni okuningi kwe-nano-size noma i-micro-size silica, ukusabalalisa okuhle nokufana kubaluleke kakhulu. Imvamisa, ukumiswa kwe-silica mono-ukusabalalisa kuyadingeka, isb ukukalwa kosayizi wezinhlayiyana. Ikakhulukazi ukusetshenziswa ko-inki noma ukumbozwa nama-polymers ukwenza ngcono ukumelana kokuqala, izinhlayiya ze-silica zidinga ukuba zincane ngokwanele ukuthi zingaphazamisi ukukhanya okubonakalayo ukugwema ukufiphaza nokugcina okusobala. Ezingubeni eziningi izinhlayiya ze-silica zidinga ukuba zincane kune-40nm ukufeza le mfuneko. Kwezinye izinhlelo zokusebenza, i-silica particle agglomeration ivimbela inhlayiya ngayinye ye-silica ukuxhumana nabezindaba ezizungezile.
Ama-homogenizers e-Ultrasonic asebenza kangcono ku-silica ehlakazekayo kunezinye izindlela zokuxuba eziphakeme kakhulu, njengezixube ze-rotary noma ama-tank agitators. Isithombe esingezansi sikhombisa umphumela ojwayelekile wokusabalalisa kwe-ultrasonic kwe-silica enamanzi emanzini.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Fumed Silica Emanzini
Ukucubungula Ukusebenza kahle ku-Silica Size Ukunciphisa
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kwe-nano-silica kuphakeme kunezinye izindlela zokuxuba okuphezulu, njenge-IKA Ultra-Turrax. I-Ultrasonics ikhiqiza ukumiswa kosayizi wezinhlayiyana ezincane ze-silica kanti i-ultrasonication ubuchwepheshe obonga amandla kakhulu. UPohl noSchubert baqhathanisa ukwehliswa kosayizi wezinhlayiyana ze-Aerosil 90 (2% wt) emanzini kusetshenziswa i-Ultra-Turrax (rotor-stator-system) naleyo ye-Hielscher UIP1000hd (1kW device ultrasonic). Umdwebo ongezansi ukhombisa imiphumela ephakeme yenqubo ye-ultrasonic. Njengomphumela wesifundo sakhe uPohl waphetha, ukuthi "Ngamandla athile e-EV ultrasound kusebenza kakhulu kune-rotor-stator-system." Ukufana kwe-energy-effiency ne-silica particle size kubaluleke kakhulu ezinqubweni zokukhiqiza, lapho izindleko zokukhiqiza, amandla wenqubo nekhwalithi yomkhiqizo.
I-Ultrasonics vs. I-Ultra-turrax yokuSabalalisa kwe-Silica
Izithombe ezingezansi zibonisa imiphumela etholwe nguPohl ngokuthwebula ama-granules we-silica spray. (Chofoza ezithombeni ukuze ukhulise!)
(ngakwesokunxele: ngaphambi kokubeletha, kwesokudla: ngemuva kokubeletha)
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ekuhlakazeni isililika. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Yini iSilica (SiO2, Silicon Dioxide)?
I-Silica iyinhlanganisela yamakhemikhali eyakhiwe nge-silicon ne-oxygen nefomula yamakhemikhali i-SiO2, noma i-silicon dioxide. Kunezinhlobo eziningi ze-silica, njenge-quartz ehlanganisiwe, i-silica ene-fumed, i-silica gel, nama-aerogels. I-Silica ikhona njengenhlanganisela yamaminerali amaningana futhi njengomkhiqizo wokwenziwa. I-Silica ivame ukutholakala emvelweni njenge-quartz nasezintweni eziphilayo ezahlukahlukene. I-silicon dioxide itholakala ngokumba izimayini nokuhlanzwa kwe-quartz. Izinhlobo ezintathu eziyinhloko ze-silica e-amorphous yi-pyrogenic silica, i-silica eqondile kanye ne-silica gel.
I-Fumed Silica / iPyrogenic Silica
Ukushisa i-silicon tetrachloride (SiCl4) kwilangabi le-hydrogen elicebile oksijini kukhiqiza intuthu yeSiO2 – i-silika enomsindo. Ngenye indlela, isihlabathi se-quartz esivuthayo ku-3000 ° C arc kagesi, sikhiqiza i-silica enefutha, nayo. Kuzo zombili izinqubo, amaconsi amancane abangelwa yi-amorphous silica fuse angena ezinhlakeni ezinamagatsha, ezinjengamaketanga, nezinhlangothi ezintathu. Lezi zinhlayiya zesibili bese zihlangana zibe yimpuphu emhlophe enobuningi obuncane kakhulu nendawo ephezulu kakhulu. Usayizi wezinhlayiyana oyinhloko we-silika engafakwanga ukungena ngaphakathi iphakathi kuka-5 no-50 nm. I-silica ethathiwe inomphumela wokuqina oqinile. Ngakho-ke, i-silica ene-fumed isetshenziswa njenge-filler ku-silicone elastomer kanye nokulungiswa kwe-viscosity kupende, ukumbozwa, ukunamathela, ama-inki wokuphrinta noma izinhlaka ze-polyester ezingafakwanga. I-Silica ethathiwe ingelashwa ukuyenza ibe yi-hydrophobic noma i-hydrophilic kunoma iyiphi i-organic organic noma i-aqueous applications. I-Hydrophobic silica iyinhlangano esebenzayo ye-defoamer (i-anti-foaming agent).
Chofoza lapha, ukuze ufunde nge-ultrasonic degassing ne-defoaming.
Inombolo ye-Cased Silica Cumed 112945-52-5
I-Silica Fume / Microsilica
Umlilo weSilica uyi-ultra-fine, i-nano-size powder eyaziwa nangokuthi yi-micro-silica. Umlilo weSilica akumele udidaniswe nesilica enefutha. Inqubo yokukhiqiza, i-particle morphology kanye nezinsimu zokusetshenziswa komlilo we-silica konke kuhlukile kunalokho kwe-silica enomsindo. Umlilo weSilica uyi-amorphous, non-crystalline, ifomu le-polymorph le-SiO2. Umlilo weSilica uqukethe izinhlayiya eziyindilinga ezinobubanzi bezinhlayiyana ezijwayelekile eziyi-150 nm. Ukusetshenziswa okugqame kakhulu komlilo we-silica kunjengezinto ze-pozzolanic zokhonkolo wokusebenza okuphezulu. Kungezwe kukhonkolo kasimende wasePortland ukuthuthukisa izakhiwo zikakhonkolo, njengamandla okucindezela, amandla ebhondi, kanye nokumelana nomhuzuko. Ngaphandle kwalokho, intuthu yesilika inciphisa ukutholakala kokhonkolo kuma-chloride ions. Lokhu kuvikela insimbi eqinisa ukhonkolo ekugqobeni.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuxubana kwe-ultrasonic kasimende kanye nomlilo we-silica, sicela uchofoze lapha!
Inombolo ye-Silica Fume CAS: 69012-64-2, inombolo ye-Silica Fume EINECS: 273-761-1
I-silica encishisiwe ifomu elimhlophe le-powdery synthetic amorphous ye-SiO2. I-silica encishisiwe isetshenziswa njengokugcwalisa, ukuthambisa noma ukwenza ngcono ukusebenza kwepulasitiki noma injoloba, isb. Amathayi. Okunye ukusetshenziswa kufaka phakathi i-ejenti yokuhlanza, ukuqina noma ukupholisha ezintweni zokuxubha.
Ukuze ufunde kabanzi ngokuxubana kwe-ultrasonic ekukhiqizeni umuthi wamazinyo, sicela uchofoze lapha!
Izinhlayiya eziyinhloko ze-silika efuthwe zinobubanzi obuphakathi kuka-5 no-100 nm, kanti ubukhulu be-agglomerate bufinyelela ku-40 µm ngosayizi wesilinganiso se-pore sikhulu kuno-30 nm. Njenge-silica ye-pyrogenic, i-silica eqhamukile empeleni ayiyona into encane.
I-Fumed Silica ikhiqizwa imvula evela kusixazululo esiqukethe usawoti we-silicate. Ngemuva kokuphendula kwesixazululo se-silicate esingathathi hlangothi nge-mineral acid, izixazululo ze-sulfuric acid kanye ne-sodium silicate zengezwa ngasikhathi sinye nokuphazamiseka, njengokuxakaniseka kwe-ultrasonic, ukunisela. I-Silica igxila ezimweni ezinomsoco. Ngaphandle kwezinto, njengobude besikhathi semvula, izinga lokungezelela lama-reactants, izinga lokushisa kanye nokuhlushwa, ne-pH, indlela namandla okuxakaniseka kungahlukahluka ku-silica. Ukuxakaniseka kweSonomechanical egumbini le-reactor le-ultrasonic kuyindlela ephumelelayo yokukhiqiza usayizi wezinhlayiyana ongaguquguquki futhi ofanayo. Ukuxokozela kwe-Ultrasonic emazingeni okushisa aphakeme kugwema ukwakheka kwesigaba sejel.
Ngeminye imininingwane mayelana nemvula esizwa nge-ultrasonically yama-nanomaterials, njenge-silica eqondile, sicela uchofoze lapha!
Inombolo ye-CAS enqanyuliwe: 7631-86-9
IColloidal Silica / Silica Colloid
I-colloidal silica ukumiswa kwezinhlayiya ezinhle ezingezona ezomuthi, ezinama-amorphous, ikakhulukazi eziyindilinga esigabeni esimanzi.
Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwe-silica colloids kunjengosizo lwamanzi ekwenzeni amaphepha, okucwebezelayo ukupholisha i-silicon wafer, i-catalyst ezinkambisweni zamakhemikhali, ukumunca umswakama, okunezela ekugcobeni okumelana nokulimala, noma i-surfactant yokuthambisa, ukuqinisa, ukusabalalisa noma ukusimamisa.
Ukuze ufunde kabanzi nge-colloidal silica ekugqokeni kwe-polymer yokuphikisa, sicela uchofoze lapha!
Ukukhiqizwa kwe-colloidal silica inqubo yezinyathelo eziningi. Ukungathathi hlangothi ngokuphelele kwesisombululo se-alkali-silicate kuholela ekwakheni i-silica nuclei. Ama-subunits ezinhlayiya ze-colloidal silica ngokuvamile asebangeni eliphakathi kuka-1 no-5 nm. Ngokuya ngezimo ze-polymerization la ma-subunun angahlanganiswa ndawonye. Ngokunciphisa i-pH engezansi kwe-7 noma ngokufaka usawoti amayunithi ajwayele ukuhlangana ndawonye ngamaketanga, avame ukubizwa ngama-silica gels. Kokunye, ama-subunits ahlala ahlukene futhi akhula kancane kancane. Imikhiqizo evelayo ivame ukubizwa ngokuthi i-silica sols noma i-silica eqondile Ukumiswa kwe-colloidal silica kuqiniswa ngokulungiswa kwe-pH bese kugxila, isb ngokuhwamuka.
Ukuze ufunde kabanzi ngemiphumela ye-sonomechanical kuzinqubo ze-sol-gel, sicela uchofoze lapha!
Ubungozi beSilica Health
I-crystalline silicone dioxide eyomile noma esemoyeni yi-carcinogen yamaphaphu yomuntu engadala isifo samaphaphu esibi, umdlavuza wamaphaphu noma izifo zesistimu ezizimele. Lapho uthuli lwesilica ludonswa ngaphakathi futhi lungena emaphashini kubanga ukwakheka kwezicubu ezibomvu futhi kunciphise amandla amaphaphu okuthatha i-oxygen (Silicosis). Ukumanzi nokusabalalisa kwe-SiO2 kube isigaba soketshezi, isb nge-homogenization ye-ultrasonic, kuqeda ubungozi bokuhogela. Ngakho-ke ingozi yomkhiqizo owuketshezi oqukethe i-SiO2 ukudala i-Silicosis iphansi kakhulu. Sicela usebenzise imishini efanelekile yokuvikela umuntu lapho uphatha i-silica ngefomu eyomile!
i-silika ngaphambi kokubeletha
i-silika ngemva kokubeletha